Isitayile, umfanekiso | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Isitayela, umfanekiso
Uyisusile njani ipeyinti kwi-jean: inyathelo ngenyathelo ngenyathelo
Emva kokungcolisa iibhulukhwe zabo abazithandayo ngepeyinti, abaninzi ngempazamo bakholelwa ukuba ungazilahla ngokukhuselekileyo. Abona batyhafileyo bagqiba kwelokuba benze iibhulukhwe ezimfutshane kuzo, ukuba ukuphakama kwendawo kuyakuvumela oko. Kodwa, ndikholelwe, oku kunjalo ...
Izihlangu zeBallroom zabantwana kunye nabantu abadala: ubungakanani, indlela yokukhetha
Ukubaluleka kokukhetha izihlangu ezifanelekileyo zomdaniso akunakugqithwa. Abantu abadanisa ngobuchule bayayiqonda kakuhle le nto. Ukufezekisa ubuchule, kufuneka bachithe uqeqesho kwinxalenye ebalulekileyo yexesha labo. Kwaye ukuba ukugqibelela ...
Ihempe yabasetyhini oluhlaza okwesibhakabhaka - into ebalulekileyo yewadi
Ngokumangalisayo, kodwa abantu basetyhini babonakala behle kakhulu kwaye benomtsalane kwimpahla yamadoda. Ewe asithethi ngayo yonke into ye-wardrobe yesini esahlukileyo, kodwa i-tuxedo yomzimba oze okanye ...
Isitayile seLolita: inkcazo, iimpahla
Isitayela seLolita sisisiqalo sokuqala sama-70s esidume kangangeminyaka eliqela. IJapan ithathwa njengendawo yokuzalwa yalo mkhuba wefashoni, othathe ezinye zeempawu zeRococo kunye neBaroque, kwigama elifanayo ...
Yintoni igolide ecocekileyo? Iipropathi, ukubunjwa, uvavanyo kunye nexabiso kwigram yegolide ecocekileyo
Abantu bahlala bethanda ukuhombisa imizimba yabo ngezinto ezahlukeneyo. Ukuba iminyaka emininzi eyadlulayo ubuhlalu, amatyathanga, izacholo, imisesane namacici zazinxitywa ikakhulu njengezithabatho zonqulo, ...
I-blouse-bodysuit "I-silhouette ethandekayo" ("Avon") - uphononongo lwabathengi kunye nabo banxiba le blouse
I-blouse eqhelekileyo ayihambelani kakuhle nejee, ibhlukhwe okanye isiketi. "Iibhola" zibonakala esinqeni, ekunzima ukujongana nazo, kuba kufuneka uzijonge rhoqo. Inkosikazi yale blouse inovalo kwaye ihlala ...
Unisex- yintoni? Isitayela se-unisex sivela njani kwimpahla, iziqholo okanye izihlangu?
Zininzi iikhonsepthi ezininzi kwihlabathi langoku; ezinye ziyanyamalala ngokungafunekiyo, ezinye ziyavela. Eli nqaku liza kuba luncedo kwabo bafuna ukuqonda eli gama njenge-unisex: yintoni kwaye ...
I-Anorak Nike iya kuhlala iyimfashoni
Kwifashoni, izinto zemidlalo zihlala zihlala kwindawo yokuqala. Iibhatyi ezikhanyayo okanye izithinteli-moya bezikwizikhundla ezifanelekileyo kwinqanaba kangangeminyaka eliqela. I-Nike anorak ingene apho ngokukhawuleza kwaye kwangoko ...
Inwele (iinwele zamatye zeVenus). Ifoto, iipropathi kunye nexabiso
I-Quartz lelinye lawona matye axabisekileyo anqabileyo. Ukuthandwa kwayo kungenxa yobuhle bayo kunye neendleko eziphantsi kakhulu kwezimbiwa. Enye yezona ntlobo zinomdla ze-quartz zinoboya, ilitye elinegama lenkondlo ...
Iimfihlo zesitayile: Indlela yokunxiba iBeret
Igama "i-beret" linxulunyaniswa ngokungazi nomfanekiso wabafazi abahle baseFrance abanesigqubuthelo sentloko kwizinwele zabo. Kwifashoni yanamhlanje, sisimntwiso somtsalane waseParis, uphawu lobufazi nobunkunkqele. Kwaye ukuba abafazi baseFrance base ...
Yintoni umkhono omde, kunye nento oza kuyinxiba?
Abo bangaziyo ukuba yeyiphi imikhono emide balahlekile kakhulu. Ngapha koko, le nto yenye yezona elula kakhulu. Esi sisikipa esinemikhono emide esenziwe ngobuhle kwaye sithambile ...
I-rose kwibhotile-indlela entsha engapheli-i-rose
Iintyatyambo yinto yokuqala ethi qatha engqondweni xa indoda ifuna ukoyisa umfazi. Isimboli sothando, intabatheko, uthando olukhulu kunye nomnqweno, zizinto ezingqinisisa iimvakalelo kunye nomnqweno wokufuna ukukholisa. Rose kwi ...
"Balenciaga" (isiqholo): inkcazo yevumba, umenzi kunye nohlolo
I-Balenciaga sisiqholo ebesikuphela komthombo wengeniso kwindlu yefashoni ekwelo gama linye. UCristobal Balenciaga wayengumntu onetalente we-couturier owayedala iimpahla ezintle kunye nezinto ezifanelekileyo. Iingxowa zolu hlobo zithandwa ...
Uhamba ngombala onjani kwimpahla yokunxiba?
Kutshanje, isitayile "somkhosi", esidityaniswe ngokuqinileyo neskimu sombala wekhaki, sibuyele kwifashoni kwakhona. Kuyimpazamo ukucinga ukuba imibala ebizwa ngokuba "yasemkhosini" ilungele kuphela amantombazana amancinci aqaqambileyo. Kuba…
Ukukhetha indawo oza kuyithenga kuyo ijacket eseYekaterinburg
Kwanele ukuthenga ibhatyi ephantsi kube kanye ebusika, njengoko uba lilungu lolo hlobo lwempahla. Abantu baseRussia bathandana naba bahlanguli bashushu bemozulu eqhaqhazelisa amazinyo ngenxa yokukhanya kwabo kunye neempawu ezintle zokugquma ubushushu. Iidyasi ezantsi ixesha elide ...
UCandice Swanepoel: Iparamitha yomfanekiso, ubuqili bezinto zokuzoba kunye nobomi bobuqu bemodeli (ifoto)
Umhlaba wefashoni ngumzi-mveliso weedola ezibhiliyoni yonke imihla. Ukudubula iimagazini, ukubonisa ingqokelela entsha, ukuphuhlisa iindlela ezintsha, ukufumana abafoti kunye nezinye iingxaki ezininzi ziyabakhathaza abayili, abayili befashoni, abahleli ...
Yeyiphi inkampani yokuthenga iimpahla zasebusika kwimoto yekhephu? Ingubo yasebusika yeqhwa: Imilinganiselo yoVeniso
Kutshanje, kuye kwaba yimfashini kakhulu ukuba basebenzise ixesha labo lokuzonwabisa ebusika ngaphandle kwekhaya. Ukuba ngaphambili abemi belizwe lethu babekhetha ikhaya elithozamisayo kubanda busika, ngoku minyaka le ...
Umzi mveliso weFuru "Kalyaev": uphononongo lwemveliso
Ngaphandle kwento yokuba imfashini inenekazi elinemeko eguqukayo, iingubo ezintle zoboya bendalo ziya kuhlala ziyimbalasane yayo nayiphi na ikhabethe labasetyhini. Akunangqondo ukucinga ngengubo egqibeleleyo efudumeleyo kunye nemood yakho ...
Unganxiba njani iilokhwe zekwindla yamadoda?
Ngokufika kwemozulu ebandayo, imfuneko yeempahla zangaphandle ezintle nezifudumeleyo zivakala ngendlela engazange yabonwa ngaphambili. Olona khetho lulungileyo kwabasetyhini nakumadoda yingubo. Le nto yewodrophu kudala ikhethelwe ...
Page 1 Page 2 ... Page 42 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-3,435.